Mission & Vision | MPS Institute of Music
MPS Institute of Music (officially named Myanmar Praise School, Institute of Music) was established in 2003 by missionary Kwang-Jin Choe and Myung-Soon Chung, who came to Myanmar in 2001 after training at the YWAM. Its curriculum is four years for college-aged students.
Since the 1960s, music education has disappeared in Myanmar. And our school has been established withavision for systematic music education and the cultivation of praise leaders. So far, there have been 11 graduates (131 students). Students who have been sent and educated in MPS will return to their churches after graduation to fulfill their mission as praise leaders and ministers. Students will have the tools of music acquired based on faith education to achieve the mission of an influential Christian in the world.
MPS 찬양학교(정식명칭: Myanmar Praise School, Institute of Music)는 캐나다 캘거리 제일장로교회에서 파송받아 제주 YWAM(열방대학)에서 훈련 후 2001년 미얀마로 들어온 최광진, 정명순 선교사에 의해 2003년에 설립된 4년제 음악, 찬양학교입니다.
1960년대 이후로 음악교육이 사라진 미얀마에 체계적인 음악 교육과 찬양 리더 양성에 대한 비전을 품고 설립되어, 현재까지 11회(131명) 졸업생을 배출했습니다. 교회에서 파송되어 교육받은 학생들은 졸업 후 각 교회로 돌아가서 찬양 리더 및 목회자로서의 사명을 감당하고 있으며, 일반 학생들은 신앙교육의 바탕 위에 얻어진 음악이라는 도구를 가지고 세상 속에서 영향력 있는 그리스도인의 사명을 감당하고 있습니다.
MPS ချီးမွမ်းခြင်းကျောင်း (တရားဝင်အမည် - မြန်မာနိုင်ငံဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကျောင်း, ဂီတတဣသိုလ်သည်) ကနေဒါနိုင်ငံ ခယ်ဂရီမြို့ရှိ Presbyterian အသင်းတော်မှ သာသနာပြုဆရာ ချွဲဂွါင်ဂျိန် နှင့်ဇနီးဂျောင်မြောင်ဆွန်းတို့အား သာသနာပြုရန်စေလှတ်ခြင်း ခံရပြီး ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဂျယ်ဂျုးမြို့မှာရှိတဲ့ YWAM တွင်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးနောက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့စတင်ရောက်ရှိပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဆရာချွဲဂွါင်ဂျိန် နှင့်ဇနီး ဆရာမဂျောင်မြောင်ဆွန်းတို့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၄နှစ်တာ သင်ကြားပို့ချပေးသော ဂီတ၊ ချီးမွမ်းခြင်းကျောင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကတည်းက ပျောက်ကွယ်သွား သော တေးဂီတပညာရပ်များကိုကွျန်ုပ်တို့ကျောင်းအနေဖြင် လည်းရူပါရုံထားရှိပြီး စနစ်ကျသော တေးဂီတပညာရပ် နှင့်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နိုင်သော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပျိုးထောင်ပေးဖိုရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပြ ုလုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆင်းပြီးသွားကြတဲ့ကျောင်းသား/သူမျာ(၁၃၁)ယောက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကိုလည်း နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ အသင်းတော်၏ ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် ဂီတပညာရပ်များကိုသင်ယူနေကြသောကျောင်းသား/သူများသည် ကျောင်းဆင်းသွားပြီးနောက် မိမိအားကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သောအသင်းတော်သိုပြန်သွားပြီး အမှုတော်မြတ်၌ ပါဝင်ဆက်ကပ်အစေခံလျှက်ရှိပါသည်။ ဓမ္မပညာကိုအခြေပြပြီး ဂီတပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနေကြသော ကျောင်းသား/သူများသည်အမှူတော်ဆောင်ရွက်သောနေရာ အရပ်ရပ်၌ ဂီတပညာအားဖြင့်လည်း ပါဝင်ဆက်ကပ်အစေခံခြင်းကြောင့် များစွာသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ မွန်မြတ်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်အဖြစ်ခိုင်ခံ့စွာ ရှင်သန်ရပ်တည်လျှက်ရှိနေပါသည်။